U Htin Kyaw is one of the vice-presidential nominees put forward by the National League for Democracy (NLD) today. He is certain to becomeapresident after the votes by the parliament in the next few days. In the current system, the winner among the three vice-presidential nominees will become the president, and the rest vice-presidents. Since NLD hasahuge majority in the parliament, he is certain to become the president. Please note that NLD also nominated Henry Van Thio, an ethnic Chin, to be one of the vice-presidents. But U Htin Kyaw is favored by NLD to become the president. Unelected military representatives will also nominate another vice-president.
He studied economics at Rangoon University, computer science at the University of London, and management at Arthur D. Little School of Management in Cambridge, Massachusetts. He worked both in academia and government services for many years before retiring in 1992.
He is of an ethnic Mon descendant, and the son of famous writer Min Thu Wun. His pen name is Talaban,afamous Mon warrior under King Binnya Dala (ဗညားဒလ [bəɲá dəla̰]).
The following text in Burmese is his brief biography by Nay Phone Latt.
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့သား ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ် ဂန္တဝင်စာရေးဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်၏ ဒုတိယမြောက် သားဖြစ်သည်။
၁၉၄၆ ဇူလိုင် ၂၀ တွင် မွေးဖွားသည်။
၁၉၆၆-၆၇ စီးပွားရေးပညာဘွဲ့၊ B.Eco
၁၉၆၈ M.Eco (part 2- တက်ရောက်စဉ် တက္ကသိုလ်နည်းပြ အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်)
၁၉၇၀ University of Computer Centre သို့ ပြောင်းရွှေ့ပညာသင် (Programmer / Analyst)
၁၉၇၅ ဌာနခွဲမှူး ( အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း)
၁၉၈၀-၁၉၉၂ နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန (FERD)
၁၉၉၂ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ရာထူးမှနှုတ်ထွက်
၁၉၈၇ Arthur DeLittle, Management Education Institute, Cambridge, Massachusetts တွင် ပညာသင်ယူခဲ့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နောက်ကွယ်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေခဲ့သူတစ်ဦး လည်းဖြစ်သည်။ စင်စစ် သူသည် ဒီချုပ်ပါတီထက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်သာ ပိုမိုနီးကပ်သူဖြစ်သည်။ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေစဉ်အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပြင်ပကမ္ဘာကို ချိတ်ဆက်ပေးခဲ့သောလူအနည်းစုတွင် ဦးထင်ကျော်လည်းပါဝင်သည်။ သူ့ကို သိုသိပ်လျှို့ဝှက်စွာ နေတတ်သူအဖြစ် ဒီချုပ်ပါတီဝင်များက သိထားကြသည်။
ဦးထင်ကျော်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထက် အသက်တနှစ် တစ်လ တစ်ရက်ငယ်ရွယ်သူ ဖြစ်သော်လည်း မက်သဒစ်ကျောင်း(ဒဂုံ ၁)တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အတူ ပညာဆည်းပူးခဲ့သူဖြစ်သည်။
၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် အစိုးရဝန်ထမ်းအဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော NLD ပါတီသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သူသည်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သံတမန်ရေးရာ အရာရှိလည်းဖြစ်သည်။ ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်သည်။
ဦးထင်ကျော်သည် ဖခင်ဖြစ်သူ၏ ကလောင်ခွဲဖြစ်သော ဒလဘန်းအမည်ဖြစ် သုတစာပေ နိုင်ငံရေးစာပေ တို့ကိုရေးသားခဲ့သည်။ ဒလဘန်းကလောင်အမည်ဖြင့် သူ၏ဖခင် ဆရာမင်းသုဝဏ်အကြောင်းရေးသည့် "အဘဘဝ အဘအကြောင်း တစေ့တစောင်း" စာအုပ်မှာ ဦးထင်ကျော်၏ ထင်ရှားသည့် လက်ရာဖြစ်သည်။
လက်ရှိသမ္မတ ဖြစ်နိုင်ချေအရှိဆုံးသူများထဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ စိတ်အချရဆုံးသူအဖြစ် လည်းကောင်း မိသားစုမျိုးရိုး သမိုင်းကြောင့် လည်းကောင်း ရိုးသားဖြောင့်မတ်သော စိတ်ထားရှိ၍ လည်းကောင်း စသည့် အရည်အချင်းများကြောင့် NLD ၏ သမ္မတလောင်းစာရင်းတွင် တစ်ပေးခြင်းခံထားရသူ တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။
NLD နာမည်ကြီး ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သော ဦးလွင်၏သမီး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်စုစုလွင်၏ ခင်ပွန်းလည်း ဖြစ်သည်။
burma htin kyaw mon